Dharka ragga ee soo socda deyrta soo socota | Ragga Stylish
Xagaagu si wanaagsan buu u horumarey. Waxaa la joogaa waqtigii hore loo sii eegi lahaa oo taas la muujin lahaa Waxay noqon doontaa isbeddel ku yimaada moodada ragga inta lagu jiro deyrta iyo inta ka dhiman sanadkan.
Waa sidee ragga moodada soo socda dayrta?
1 Xorriyad hal abuur leh oo aan lahayn caqabado
2 Waxyaalaha deyrta
3 Midabada qaabka ragga
Xorriyad hal abuur leh oo aan lahayn caqabado
La xoriyad hal abuur leh laga yaabee inay noqon doonto mid ka mid ah astaamaha ugu caansan wax kasta oo ragga u ekaan doona moodada. Isku-darka walxaha muuqda ee aan la-heshiin karin. Fikradaha ku milmay hal cunsur.
Koodhka farqiga u dhexeeya muuqaalka isboortiga iyo qaabka rasmiga ah ayaa dhab ahaantii laga tagaa, si loo siiyo gelitaanka u janjeedha gebi ahaanba. Heerarka caadiga ah waxaa loo qaatay inay la mid yihiin caajisnimo iyo dhiirranaan la'aan.
Caqabadaha jinsiga ayaa sidoo kale laga tegayaa, oo u oggolaanaya qaabab cusub oo madmadow lagu dhawaaqay, iyadoo aan waligaa laga quusan ruuxa labka ah.
SneakersKu dhiirrigeliya waxqabadyada bannaanka sida socodka, waxay u adeegi doonaan sidii wehel u ah dhar buuxa oo lagu xardhay.
Hordhaca surwaalka boorsada leh, oo lagu dhejiyay dhexda, oo lagu kabayo dhididka gacmaha lagu sameeyo, oo hodan ku ah faahfaahinta gacmaha lagu sameeyay. Koodhadh waaweyn oo cufan Waxay dhammeeyaan qaab casri ah, taas oo aan dayacin shaqada waxtarka leh ee wejiga heerkulka hooseeya ee dharka.
Midabada qaabka ragga
ka midabada cad waxay yeelan doonaan joogitaan xoog leh dharka dayrta ee sanadkan, labadaba shaati, surwaal, funaanado iyo jaakado. Qaabeynta waxaa lagu dhisi karaa gudaha saldhig u ah tirooyinka joomatari, iyada oo la tixraacayo xayawaanka adduunka ama khadadka dhaqdhaqaaqa xorta ah.
ka funaanadaha nooca minijaha ah waxay sameeyaan godkooda, tusaale kale oo u adeegaya si loo muujiyo sida khadka khayaaliga ah ee u dhexeeya kuwa aan rasmiga ahayn iyo kuwa xarrago leh uu duugoobayo. Dharka oo wata faahfaahinta ugu yar, iyada oo aan la dayacin shaqada dharka hufan iyo daabacadaha yaryar.
Sidoo kale, shaatiyada waa la balaarin karaa si ay u sameystaan ​​jubbado waaweyn oo leh saameyn dhanka bariga ah, Si xishood la'aan ah loogu daro kordhinta dharka oo ka badnaan kara dhererka jilbaha oo go'aan ku imaan kara anqawyada. Dhar ka samaysan xariir, cudbi ama linen si aan loo xadidin dhaqdhaqaaqa ama raaxada ragga oo leh qaab casri ah iyo mid magaalo, iyadoo aan lagu bixin foomam aan caadi ahayn.
Ilaha sawirka: YouTube /
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Qaabkee ayay ragga moodkoodu noqon doonaa dayrta sannadkan?